Iindaba-Imaski yoBuso boNyango obuLahliweyo
Eli nqaku liqulathe iimbekiselo kwiimveliso ezisuka komnye okanye ngaphezulu kubakhangisi bethu.Sinokufumana imbuyekezo xa ucofa amakhonkco ezi mveliso.Imigaqo isebenza kunikezelo oludweliswe kweli phepha.Ngemigaqo-nkqubo yethu yentengiso, nceda undwendwele eli phepha.
Kwiintsuku emva kokuba iBritish Airways ibe yinqwelomoya yokuqala enkulu emhlabeni ukuphakamisa imfuno yemaski, inqwelomoya ibangele ukubhideka phakathi kwabakhweli emva kokuba ibonakale iyirhoxisa imithetho yayo yemaski ehlaziyiweyo.
Kwakuloo veki iNtombi yaseAtlantiki kunye neHeathrow elandele ngayo ukukhulula imigaqo-nkqubo yemaski, akubonakali ngathi yonke into ihamba kakuhle kumthwali weflegi yaseBritane ukutyhala umgaqo-nkqubo ngexesha le-16 kaMatshi.
UJordan Waller, umhleli olawulayo we-TPG yase-UK, wabhabha iBritish Airways esuka eLondon Heathrow (LHR) ukuya eDublin (DUB) nge-17 kaMatshi kwaye wafumanisa ukuba imimiselo yemaski iyabhidisa.
Emva kokukhwela inqwelomoya, umlindi wenqwelomoya wamxelela ukuba kufuneka anxibe imaski kwaye kwangoko wamnika enye. Nangona kunjalo, kulo lonke uhambo lokuhamba ngenqwelomoya, wabona abanye abakhweli benganxibanga imaski kunye nabasebenzi benqwelomoya bengawunyanzeli lo mthetho.
EZIQHELEKILEYO: I-Ireland iwisa uninzi lwemithetho yayo ye-COVID-19: Abantu baseMelika bamkelekile ngexesha loSuku lweSt.
Ngaphandle kokukhwela, ekuphela kwento ekhankanyiweyo yeemaski kuxa inqwelomoya yayisondela ekufikeni, kwabhengezwa ukuba bonke abakhweli kuya kufuneka banxibe iimaski xa behla. Oku kufana nencoko yangaphambili kosuku, apho abanye abahambi baseJordani eHeathrow babaxelele. ukuba iBritish Airways yayibaxelele ukuba kuya kufuneka baphinde banxibe kuphela xa bengena kwizikhululo zeenqwelomoya apho kufuneka iimaski ezigunyaziswe kuzwelonke.Beka imaski.
Ukongeza kwisiphithiphithi, iHeathrow isabonisa imiyalelo kwiibhodi zezaziso zokuba iimaski kufuneka zinxitywe, nangona uHeathrow uthe uza kuwisa imaski nge-16 kaMatshi. iimaski kwisikhululo seenqwelomoya.Izikhululo zeenqwelo moya - abakayihlazisi imiqondiso yabo.Nangona sele kudlule iintsuku ezininzi ukusukela oko babhengeze ekuqaleni kwale veki ukuba bayakuyiyeka imfuneko yemaski.
Ngokweengxoxo zeshishini kwiforum ye-intanethi i-FlyerTalk, abasebenzi bekhabhathi yeBritish Airways bakholelwa ukuba inqwelomoya sele iwubuyisela umva umgaqo-nkqubo wayo wokuphelisa imaski.
Umsebenzisi weFlyerTalk u-EJetter wabhala: “Abakhweli kunye nabasebenzi basafuna imaski (ubuncinci kwiCityFlyer, andiwuboni umsonto ophambili... Inkampani iphanda imiba ethile yokuthotyelwa, ngoko ke zonke [iBritish Airways] kunye neBA CityFlyer zifuna imaski okwangoku. ) inqwelomoya."
“Sixelelwe ukuba kukho umba abangakwaziyo ukuwuchaza, kungoko de kube sisaziso esinye iimaski zisisinyanzelo kuzo zonke iinqwelomoya,” ugqabaze watsho elinye elilungu labasebenzi.” Kuluvuyo olukhulu kubasebenzi, ngoku kufuneka bayiphonononge le nto kwi-BA's. iphulo elisebenzayo leendaba zosasazo malunga nokususa iimaski namhlanje. "
Ngokutsho komthombo weBritish Airways oye wafikelela kwi-TPG kumajelo asekuhlaleni emva kwengxelo yethu yokuqala, i-airline "inxibelelane ngaphakathi ukuba zonke iindlela zisafuna imaski ebhodini. Nokuba iindiza zasekhaya, "ezongeza ukuba kubonakala ngaphambili Kusenokuba ngaphambi kwexesha ukubhengeza a imfuneko yemaski enyanzelekileyo.
Ngexesha lokubhalwa, iwebhusayithi esemthethweni yeBritish Airways isatsho ukuba iimaski zinyanzelekile, utshintsho ukusuka kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. iiyure, ke ndicela uze nezinto zokuhamba ezaneleyo."
Ibiyiveki enkulu kumzi mveliso wokhenketho wase-UK njengoko uqhubeka nokubuyela kwesiqhelo emva kwefuthe elibi lobhubhani we-COVID-19, kunye neenqwelomoya ezininzi kunye nezikhululo zeenqwelo moya ngoku zijonge ukwamkela abahambi ngeenqwelomoya ngaphandle kwemaski yomgangatho ongqongqo njengomgangatho.
U-BA COO uJason Mahoney kule veki uyincome “njengenyathelo elincomekayo eliya phambili”, iBA ichaza ukuba ukugqunywa kobuso kufunwa kuphela ebhodini ukuba bayafuneka kwindawo abaya kuyo, kubandakanya ne-US, apho iiMasks zeenqwelomoya ziya kuhlala zinyanzelekile. ukuhamba kude kube nguAprili ubuncinane.
Ngokuqinisekileyo, esi sigwebo esitsha sibeka uxanduva lokhuseleko lwe-COVID-19 ngokuqinileyo kubakhweli abanokwenza "ukhetho lobuqu kunye "nokuhloniphana izinto abazikhethayo."
Ngokudanisayo, ndibhabha amatyeli aliqela ngexesha lobhubhani kwaye ndonwabile yimfuno yemaski.Ngeliphandle, ingandigcina ekubhabheni.Akukho mntu ufuna ukubamba i-coronavirus phesheya kwaye onakalise iholide yabo, okanye uthandazela ukuba i-inshurensi yakho isebenze ngendlela ocinga ngayo. iyakwenza xa ufuna uncedo lwezonyango
Ngokwendalo, ezi ndaba zatsala izimvo ezixubeneyo kumajelo eendaba ezentlalo, uninzi lwabakhenkethi rhoqo besamkela iindaba njengentshukumo ekrelekrele.
Iindaba ezimnandi, bendiseJet2 ngempelaveki kwaye umthetho wemaski (kufuneka unxitywe xa uhla kwizikhululo zeenqwelomoya zaseSpain) wanyuswa ngenqwelomoya ukuya nokubuya eSpain.Isikhululo seenqwelomoya saseNewcastle asifuni imaski, nto leyo ingcono kakhulu.
Ukuza kuthi ga ngoku, iBritish Airways ayinalo igama elisemthethweni malunga nokuba iceba ukulahla umgaqo-nkqubo omtsha wemaski. Siye sadibana nathi ukuze siphawule kwaye siza kuhlaziya eli bali ngokukhawuleza ukuba kukho inkqubela.
Unikezelo lolwamkelo: UkuKhuthazwa okuKhawuleza koBusuku obuMahala-Fumana amanqaku angama-130,000 oMvuzo kunye namaBhaso oBusuku obuMahala emva kokuchitha i-$2,000 ekuthengeni okufanelekileyo kwikhadi lakho elitsha kwiinyanga ezi-3 zokuqala zobulungu bekhadi. Imigaqo iyasebenza.
Yonwabela ukuya kubusuku obu-4 obusimahla ukuze uqalise ukuphawula ukubaleka kuluhlu lwakho lwamabhakethi.130,000 Amanqaku eBhonasi angakufumana ukuya kutsho kubusuku obu-3 simahla kwiihotele ezingaphezu kwama-4,400 kwihlabathi jikelele!Ngaphezu koko, sebenzisa iMbasa yakho yaSimahla yoBusuku kwiihotele ezingaphezu kwe-6,600 kwihlabathi jikelele kwaye ufumane ubusuku obunye simahla. !IiMbasa zaSimahla zasebusuku zinokusetyenziswa nabuphi na ubusuku beveki kungekho mihla yokucima, kuquka neHilton Cancun esanda kuvulwa, indawo yokuchithela ikhefu equka konke.
ISinyanzelo soHlelo: Izimvo ezichazwe apha zezombhali yedwa hayi ezo zayo nayiphi na ibhanki, umniki wekhadi lokuthenga ngetyala, inqwelomoya okanye ikhonkco lehotele, kwaye azikaphononongwa, zivunywe okanye zivunywe ngenye yezi mibutho.
I-Disclaimer: Ezi mpendulo zilandelayo azizange zibonelelwe okanye zigunyaziswe ngabaBakhangisi beBhanki. Iimpendulo azikaphononongwa, zivunywe okanye zivunywe ngenye indlela ngabaKhangisi beBhanki. Ayiloxanduva lomkhangisi webhanki ukuqinisekisa ukuba zonke izithuba kunye/okanye imibuzo iyaphendulwa.
Uninzi lwamakhadi okuthenga ngetyala avela kwisiza avela kwiinkampani zamakhadi okuthenga ngetyala apho iThePointsGuy.com ihlawulwa.Imbuyekezo enjalo inokuchaphazela indlela kunye nalapho iimveliso zivela khona kule webhusayithi (kubandakanywa, umzekelo, ulandelelwano oluvela ngayo). Le webhusayithi ayiquki zonke iinkampani zamakhadi okuthenga ngetyala okanye zonke izinto ezifumanekayo zekhadi letyala.Nceda ujonge iMigaqo-nkqubo yeNtengiso kwiphepha lethu ngolwazi oluthe kratya.
Inqaku loMhleli: Izimvo ezichazwe apha zezombhali yedwa, hayi ezo zayo nayiphi na ibhanki, umniki wekhadi letyala, inqwelomoya, okanye ikhonkco lehotele, kwaye azikaphononongwa, zivunywe, okanye zivunywe nangayiphi na kwezi mibutho.
Izibonelelo zekhadi letyala ezivela kwiwebhusayithi zisuka kwiinkampani zekhadi letyala iThePointsGuy.com ifumana imbuyekezo kuyo.Imbuyekezo elolo hlobo inokuchaphazela indlela kunye nalapho iimveliso zivela khona kule webhusayithi (kubandakanywa, umzekelo, ukulandelelana kwazo). Iwebhusayithi ayiquki zonke iinkampani zekhadi letyala okanye zonke izibonelelo zekhadi letyala.Nceda ujonge iMigaqo-nkqubo yeNtengiso kwiphepha lethu ngolwazi oluthe kratya.
Ixesha lokuposa: Mar-19-2022
Ffp1 Imaski elahlayo, Mask Njengobuso, IMask yezoNyango eLahliweyo, 3 Gcoba iMaski yoBuso eLahliweyo, Ukulahlwa kweHalf Mask Respirator, Uyilo lweMaski yobuso,